मलेसियामा कुखुराको मासु अहिलेसम्मकै महँगो, किन ? - krishipost.com
मलेसियामा कुखुराको मासु अहिलेसम्मकै महँगो, किन ?
मलेसिया सरकारले फ्रोजन चिकनको अभाव कम गर्न यो डिसेम्बर देखि अर्को साल फरवरीसम्म चिकन आयात गर्न अनुमति दिएको छ । मलेसियाको कृषि तथा खाद्य उद्योग मन्त्रालयले आज जनाएको जानकारी अनुसार बिभिन्न कम्पनीहरुलाई आयात अनुमति दिएको हो ।
आयात गर्न चाहाने कम्पनीको लागि बिभिन्न सर्त राखिएको छ । फ्रोजन चिकन आयात गर्न चाहने कम्पनीहरूले मलेसियाको कम्पनी आयोग (एसएसएम) मा दर्ता गर्नुपर्ने र कोल्ड स्टोरेज सुविधा भएको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियाको प्रधानमन्त्रीले मलेसियन जनताले कम मुल्यमा चिकन पाउन र बढ्दो चिकन अभाब कम गर्न आयात को लागि जिम्मा दिन लाएको मलेसियन संचार माध्यम ले जनाएका छन् । पशु चिकित्सा सेवा मलेसिया विभाग ले जनाए अनुसार अक्टोबर र नोभेम्बरमा देशले औसत 18 प्रतिशत चिकनको अभावको सामना गरिरहेको थियो ।
यो अक्टोबरबाट आर्थिक क्षेत्रहरू विशेष गरी होटल, रेस्टुरेन्ट र खानपान सेवाहरू पुन: खोलिएपछि मलेसियामा अचानक चिकनको माग बढेको छ । बजारमा प्रति किलोग्राम चिकनको मूल्य RM10 सम्म बढेको थियो । आयात गर्ने कम्पनीले सम्बन्धित देशले अनुमति दिएको फर्म या कम्पनि बाट ल्याउन पाइने जनाएको छ ।